Imisa milyan oo doollar ayuu Turkigu KAASH ahaan u siiyey DF Somalia 4-tii sanadood ee ugu dambeeyey?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Imisa milyan oo doollar ayuu Turkigu KAASH ahaan u siiyey DF Somalia...
Imisa milyan oo doollar ayuu Turkigu KAASH ahaan u siiyey DF Somalia 4-tii sanadood ee ugu dambeeyey?!
(Muqdisho) 07 Agoosto 2021 – Turkiga ayaa maalin dhowayd ogolaaday inuu muddo sanad ah uu bishiiba Somalia siiyo 2.5 milyan oo doollar, taasoo 30 milyan oo doollar isku tegeysa sanadkii.
Dabcan ma aha markii ugu horreeysey ee uu Turkigu Somalia siiyo kab miisaaniyadeed oo loogu tala galay in lagu fududeeyo tas-hiilaadka maaliyadeed ee dalka, waloow uu musuq badani jiro.
Haddaba, imisa ayuu Turkigu kab miisaaniyadeed u siiyey DF Somalia 4-tii sanadood ee ugu dambeeyey?
Lacagtaasi waa 90 milyan oo doollar oo uu u kala bixiyey 30m oo uu bixiyey 2017-kii, 30m oo kale oo uu bixiyey 2019-kii iyo 30m ee uu haatan bixiyey. Waxaa kasii horreeysey 24m oo uu bixiyey 2016-kii, taasoo ka dhigan inuu 104m oo doollar siiyey DF Somalia muddo 6 sanadood ah gudohood.
Waloow ay kaalmadu wax uun tarayso misna dhibka jira wuxuu yahay in aanu dalku lahayn qorshe siyaasadeed oo ku fooggan sidii looga faa’iidaysan lahaa khayraadka dalka oo ku filan wax kasta oo ay u baahan tahay Somalia oo u muuqata dal uu gaarigu uga jabay inay abid ku noolaato gacan hoorsi.
Previous article”Ma Talyaani ayaa misna qaatay!” – Ingiriiska oo markale laga badiyey & weriye Ingiriis ah oo uu hadal kasoo fuqay + Sawirro
Next articleRW Rooble oo Nairobi ku wajahan & arrimo badan oo la isku hayey oo heshiis laga gaarayo